Sevhisi - Raymin Ratidza Zvigadzirwa Co, Ltd.
Concept Uye Dhizaini
Kune mashoma chete masekondi aunopihwa nemutengi. Ivo chaizvo vanogona kuve chako chakanangwa mutengi kana iwe uchigona kuvakwezva ivo kuti vatore chigadzirwa chako. Nzvimbo yakanaka yekutengesa Kadhibhodhi Ratidza kana Pepa Packaging inogona kukuitira izvi.Vagadziri vedu vanonzwisisa maitiro ekugadzira uye vachashanda newe kugadzirisa mhinduro yakanaka, ine zvinangwa zvekukubatsira iwe kugadzira zvinobudirira zvekutengesa zvigadzirwa zvinowedzera chigadzirwa chako kutengesa.
Iko hakuna yakajairwa mhinduro mune yekutenga munda. Ndiwo mashandiro edu ekuratidza mhinduro anoshanda - kuti riite rakasarudzika seako marita uye zvigadzirwa. Isu tinotevera zvaunoda chaizvo uye tinobatsirana kuisa edu ekugadzira mazano kumusoro kune projekiti. Isu tinongoziva iwe uchashamisika nemhedzisiro. Saka mibvunzo ndeyekuti, nzira dzekuwana mhinduro dzakanakisa dzinokukodzera?
Iwe une yakagadzirira-kudhinda dhizaini?
Zvinotyisa, tinogona kuita kuti dhizaini yako ive yechokwadi nemifananidzo yako. Masekero-ekunyomba anozopihwa kwauri uye pamwe neyedu nyanzvi kurudziro.
Uri kushamisika mhedzisiro mhedzisiro?
Usazvidya moyo. Isu tine 3D dhizaini zvakare ichakubatsira iwe kuti uite 3D ipe base base pane yako yekubata kana sketch nezvimwe.
Kana iwe hauna mazano zvachose?
Hazvina basa, chingotitumira chako chigadzirwa chirevo, tiudze huwandu paFSDU inoda kuisa zvigadzirwa. Isu tichagadzirisa mhinduro yako iwe nemazano edu ehunyanzvi. Nemakore eruzivo mukugadzira POP kuratidza uye kutengesa kwekutengesa, yedu dhizaini dhizaini timu yakanga yatove nekushandisa magadzirirwo mune akasiyana maindasitiri. Raymin Ratidza dhizaini dhizaini ikozvino iri kupa nyanzvi mhinduro kune ese epasi rese neChina anozivikanwa mabhizinesi.
Kuve nechimiro dhizaini kutaridzika kwakasiyana hachisi icho chete chinangwa, isu tinoshuvirawo kuita kuti ive inodhura Iine ruzivo rwekugadzira ese akasiyana marudzi ekuratidzira, Raymin Ratidziro yakatsaurirwa kushandisa yakanyanya mari nzira yekuvaka iyo kuratidza. Isu tinochengetedza mutengo wemutengi wedu uyezve tinochengetedza nharaunda nekushandisa zvishoma zvigadzirwa zvakasvibirira uye kutsiva izvo zvepurasitiki zvinhu nezvinhu zvinoshandiswazve.
Usati waenderera mberi nekuita muyenzaniso, 1: 1 ratio 3D render ichapihwa kune mutengi kuti ave nemufananidzo wekuratidzira. Zviri nyore kwazvo kune vatengi vekumhiri kwemakungwa kuti vabvumirwe nekukurumidza masampuli.
Kurumidza Mharidzo Dhirivhari
Plain chena sampuro inokwanisa kupedzwa mukati memazuva 1-2 ekushanda nepo sampuro yemuvara inogona kutora mazuva maviri ekushanda.
Yemahara sampuro Charge
Muenzaniso wedu unowanzo kuve wakasununguka kumutengi wedu kana vangada kuisa odha kwatiri.
Raymin Ratidza ine fekitori inodzora maitiro ese ari-mumba, tivimbise iwo epamusoro mhando zviyero uye kugona kuwana ako ekuratidzira uye kurongedza kwauri nekukurumidza sezvazvinogona. Tine yedu yeoffset yekudhinda muchina, hombe-saizi auto laminating muchina, auto kufa-yekucheka muchina, ect. Base pane izvi, isu tinokwanisa kunyatso kudzora mutengo uye kuburitsa zvinoratidzwa uye kurongedza nekukurumidza kupfuura vamwe vakwikwidzi.
Unhu uye Mushure mekutengesa Sevhisi Ndicho Chinhu Chinonyanya Kukosha
Isu tinogara takanamatira kune "Hwakanaka uye Mushure mekutengesa Sevhisi Ndidzo Dzinonyanya Kukosha" bhizinesi kutenda. Kuteedzera iyo ISO 9001 yemhando yepamusoro sisitimu, isu takavaka yakasimba QC timu, shandisa manejimendi kune ese zvigadzirwa mhando uye kushanda maitiro.
1 × KBA Rapida 162 5C Offset Press, Sheet Saizi 1220 × 1620
1 × KBA Rapida 145 5C Offset Press, Sheet Saizi 1060 × 1450
2 × Komori Lithrone S40 5C Offset Press, Sheet Saizi 720 × 1020
1 × Pepa Reel Sheeter, Sheet Saizi 1700 (W)
1 × Pepa Rinocheka, Sheet Saizi 1680 × 1680
1 × Auto Laminating Machine, Sheet Saizi 1220 × 1620
1 × Auto Laminating Machine, Sheet Saizi 720 × 1020
1 × Corrugated Kuisa Machine, Sheet Saizi 1650 × 1650
2 × Corrugated Kuisa Machine, Sheet Saizi 720 × 1020
2 × Epson 7910 Ruvara Zviratidzo Dhijitari Press, Sheet Saizi kusvika 610
1 × Rzcrt-2516-ⅡDhijitari Rinocheka
1 × Rzcrt-1813E Dhijitari Rinocheka
1 × Ect Bhodhi Tester
1 × Makatoni, Kadhibhodhi Resistance Yakaputswa Meter Machine
1 × Ink Adhesion Kukanda Kwayedza Muchina
Kufa-Kucheka, Kupeta & Gluing
1 × Auto Die-Kucheka Muchina, Sheet Saizi 1220 × 1620
2 × Auto Die-Kucheka Muchina, Sheet Saizi 720 × 1020
3 × Semi-Auto Die-Kucheka Muchina, Sheet Saizi 1200 × 1620
1 × Auto Bhokisi Kupeta uye Gluing Machine, Sheet Saizi 1100 × 1100
1 × Auto Bhokisi Kupeta uye Gluing Machine, Sheet Saizi 780 × 780
Kuti uchengetedze kurongedza mitengo, vamwe vatengi vanosarudza kurongedza zvigadzirwa zvavo chaizvo neCardboard Ratidza. Izvi zvinowanzoitika kana paine mhando dzakawanda dzezvigadzirwa dzinofanira kusanganiswa rongedza muFSDU.
Yedu Gungano Services Kubatanidza:
· Kuchengetwa kwekuratidzwa uye nhumbi
· Kuzadza kwekuratidzwa kwega kwega nenhumbi
· Kuiswa pamapallet madiki
· Kutakura uye kurongedza pane zvakajairwa mapallet
· Zvekutakura bvunzo
· Kuchengetwa kwemapareti akagadzirira
Vamwe vatengi vanodawo kugadzika paketi 1 kana seti dzinoverengeka dzekuratidzira mukatoni imwe ine girafu rekudzidzisa gungano.
Fekitori yedu yakadzoserwa muFoshan, iri padyo nechiteshi cheShenzhen. Zviri nyore kwazvo kuti isu timbove-chiteshi chePOS inoratidza zvese. Isu tinopa kutakura kwegungwa, kutumira kwemhepo uye kuburitsa pachena, zvinoenderana nezvaunoda.